Kuyaziwa ukuthi ukukhulelwa ihlala izinyanga eziyisishiyagalolunye - isikhathi side oqukethe shift ubuncane zonyaka ezimbili. Empeleni, iningi izifo sibi zokuphefumula kwenzeke esikhathini off-inkathi. Ngakho-ke kunzima ngempela ukuze uzivikele ngesikhathi sokukhulelwa kusukela catarrhal ukubonakaliswa, ikakhulukazi uma sicabangela ukuthi abesifazane zitholakala kule "isikhundla" siyenzeka nokwehlisa amasosha omzimba.
Okuvela phakathi nesikhathi sokukhulelwa iyiphi izenzakalo catarrhal kufanele aphathwe ngokushesha, njengoba lezi izimo kungase zibulale ukukhula komntwana. Ingxenye isiphuphutheki ukukhwehlela abandayo, amakhala yisisu kanye umphimbo obuhlungu. Ngokuvamile, omama abakhulelwe bakhathazekile bamukele noma yimiphi imithi ngesikhathi sokukhulelwa. Abaningi bayazibuza: 'Kungenzeka yini ngabantu besifazane abakhulelwe ukwenza ephefumula? ". Ochwepheshe bathi ephefumula of omama abakhulelwe is kakhulu Kunconywa iyiphi ukubonakaliswa esolwa futhi Ari.
Okukhulu inzuzo ephefumula ngesikhathi sokukhulelwa wukuthi ngesikhathi inqubo ejenti asebenzayo (lwamakhambi noma imithi) iwe ngqo esikhaleni ukuphela edingekayo (bronchus, ekhaleni, emphinjeni), ukugwema ukuchayeka letindzala, umuntu okuyinto etholakala uma ethola izidakamizwa kakhulu ngaphakathi.
Inhalations ziqhutshwa kokubili ngesikhathi sokukhulelwa kanye ekhethekile sokuvivinya umzimba nesifutho (nebulizer), futhi esebenzisa pair ngokuzimela okulungiselelwe ne ukwengeza izinto ezifanele. Ukusebenzisa nebulizer kuyadingeka ukuze ufunde imiyalelo, ukugxila isikhathi lapho ephefumula nokushintsha kokudla nokufakwa lwemithi.
Kungenzeka ukusebenzisa elula, kodwa akukho indlela ayisasebenzi ezibonisa ukuthi uhogele. Ukuze eliyifa layo umthamo futhi kudingeka ithawula ngamanzi ashisayo. Isiguli Asondele phezu amanzi ashisayo kanye amboze ikhanda lakho ithawula ukuwapheka ngesitimu kunokuwabilisa ayahwamuka ngokushesha. Amanzi ngaphambilini ungeze noma yimaphi herbal - zikagamthilini, Mint, chamomile, St John sika wort, sage kanye nabanye. ephefumula okunjalo ngesikhathi sokukhulelwa Kunconywa ngosuku izikhathi 1-2, kulo lonke ngenxa yokugula.
Intuthu ephefumula ngesikhathi sokukhulelwa nakanjani iphephile futhi isebenza ngempumelelo kakhulu izinto zokwelapha kusukela phakathi naleyo nqubo ukungena ngokoqobo zonke ipheshana zokuphefumula. abilisiwe amazambane imibhangqwana kufanele isinqandakuvunda, antitussive, sine-anti-iguliswa futhi eqeda ukuvuvukala umphumela. Ikakhulukazi amazambane ambalwa newusizo kakhulu lapho imikhuhlane, emabangeni kokuqala.
Ungakhohlwa mayelana amafutha abalulekile, futhi ngokunembile mayelana nezici zabo kwezokwelapha. Ngokwesibonelo, uwoyela zikagamthilini uphelele ngoba impatho eside ukukhwehlela, kanye ithuluzi kuyinto enhle isinqandakuvunda. Isikhathi esisodwa lapho ephefumula akufanele budlule amaminithi 10.
Nge umkhuhlane ephelezelwa amakhala yisisu, efanelekayo ephefumula namafutha "lwenkanyezi", kodwa kumelwe alisebenzise ngokuqapha, engeqisi umthamo ebekiwe imiyalelo. Ngempumelelo isinqandakuvunda futhi antitussives - a decoction of zikagamthilini, sage, chamomile, umama nosingamama.
Kanye izidakamizwa nemithi engamakhambi, kukhona alikhali futhi ephefumula. Ziyakwazi kulula kakhulu ukulungiselela, kodwa naphezu kwale mizamo ngempumelelo kakhulu imikhuhlane. Ngokuvamile ekulungiseleleni ikhambi ane-alikhali ngoba ephefumula ukusetshenziswa baking soda, kubhekwa ngempumelelo enibaziyo nobabili hhayi kuphela imikhuhlane ahlukahlukene, kodwa ngisho ukucinana kwemigudu yokuphefumula.
Nakuba inhalation ngesikhathi sokukhulelwa abhekwa cishe ephephile kokubili fetus umama okhulelwe ngoba iningi, kodwa zonke okufanayo ngaphambi kokuzisebenzisa, qiniseka ukuthi ubona udokotela wendawo yakho. Phela, umama okhulelwe kulo lonke ukukhulelwa kufanele baqaphe kakhudlwana futhi siqaphile, kunokuba njalo. Ukuzilapha akudingekile ukubhekana!
Thenga Good - uwoyela ocolisekileyo
Bee impova: kanjani ukuyisebenzisa? Bee impova: ayelapha, ukubuyekezwa
Ihhotela Hunguest Sun Resort 4 * (Herceg-Novi, Montenegro) izithombe kanye nokubuyekeza
Ukuhambelana: Umdlavuza-owesifazane umdlavuza indoda
Yamaha TDM 850 - yizinhlobonhlobo ngokuyinhloko